ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: file ရဲ့နောက်မှာ file ကို hide နည်း How to file Hidden
file ရဲ့နောက်မှာ file ကို hide နည်း How to file Hidden
ကျွန်တော် အခုတင်ပြမှာကတော့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Text ဖိုင်တစ်ခု (Notepad မှာ ရေးတာကို ပြောတာပါ)တည်ဆောက်ပြီး ဘယ်သူမှ ဖတ်လို့မရအောင် Hide တဲ့နည်းလမ်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထပ်နားလည်အောင် ပြောရရင် မိမိက သူတစ်ပါး အခြားသူ မဖတ်စေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အခြားသူငယ်ချင်းများဖတ်လို့ မရအောင် Notepad ကို အသုံးချပြီး လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
Command prompt ကို အသုံးပြုပြီး Text File တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1. Start >> Run >> cmd လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ အောက်က စာကြောင်းကို copy လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
echo visit technoplex.co.cc for cool computer tricks > technoplex.txt:hidden
2.အထက်ပါအတိုင်းပြီးက အောက်က code ကို copy ကူးပြီ paste လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
3.notepad technoplex.txt:hidden ကိုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် မိမိက အခုမှ စတင်တည်ဆောက်တာ ဖြစ်တာကြောင့် “Cannot find the C:\_etricks.txt:Hidden.txt file”. Do you want to createanew file? ဆိုပြီ yes (0r) no မေးပါမည်.။ yes ပေးလိုက်ပါ။
4.ဒါဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးနိုင်ပါပြီ။ အခုလို တစ်ကြိမ်ဘဲ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ နောက် တစ်ကြိမ်ဆိုရင်တော notepad technoplex.txt:hidden လို့ရိုက်ပြီး အရေးကြီးတာတွေကို ထပ်ထပ် ရေးလိုက်ရုံပါဘဲ။
5.မိမိအရေးကြီး တာတွေ ရေးပြီးသွားပြီ ဆိုရင် CTRL + S လို့နိုပ်ပြီးတာနဲ့ ပိတ်လိုက်ပါ။
6.ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် Start >> Run >> cmd >> notepad technoplex.txt:hidden လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ မိမိရဲ့ Text ဖိုင်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နားမလည်က ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 1:55 AM